Serivisy - Yancheng Lianggong Formwork Co., Ltd.
Afaka mifandray aminay ianao raha mila fanazavana fanampiny momba ny Lianggong Formwork ary misafidy izay rafitra Formwork mety aminao kokoa.
Ny injeniera Lianggong dia manana traikefa an-taonany maro, mba hahafahantsika manombatombana ny fepetra ara-teknika, ny teti-bola ary ny fandaharam-potoanan'ny tranokala mba hivoaka miaraka amin'ny tolo-kevitra matihanina.Ary farany, manampy anao hifantoka amin'ny rafitra mety amin'ny drafitra ara-teknika.
Ny teknisianinay dia afaka mamolavola ny sary Auto-CAD mifanaraka amin'izany, izay afaka manampy ny mpiasan'ny tranokalanao hahafantatra ny fomba fampiasana sy ny fiasan'ny rafitra formwork & scaffolding.
Ny Lianggong Formwork dia afaka manome vahaolana mitombina ho an'ny tetikasa samihafa miaraka amin'ny drafitra sy fepetra samihafa.
Hanomana ny sary sy ny teny nindramina mialoha izahay ao anatin'ny andro vitsivitsy rehefa nahazo ny mailakao izahay izay misy ny sary ara-drafitra.
Lianggong dia hanomana ny fiantsenana rehetra & fivorian'ny sary ho an'ny mpanjifa alohan'ny Lianggong vokatra tonga ny toerana.
Ny mpanjifa dia afaka mampiasa ny vokatray araka ny sary.Mora sy mahomby izy io.
Raha toa ianao ka vao manomboka ny Lianggong formwork & scaffolding rafitra na ianao mitady ny tsara kokoa ny rafitra, dia afaka mandamina ny mpanara-maso mba hanome ny matihanina fanampiana, fiofanana & fisafoana eo an-toerana.
Lianggong dia manana ekipa merchandiser matihanina ho an'ny fanavaozana sy ny fanatanterahana ny baiko, manomboka amin'ny famokarana ka hatramin'ny fanaterana.Mandritra ny famokarana dia hizara ny fandaharam-pamokarana sy ny fizotran'ny QC miaraka amin'ny sary sy horonan-tsary mifanaraka amin'izany.Rehefa vita ny famokarana, dia hitifitra ihany koa ny fonosana sy ny entana ho firaketana, ary avy eo dia manolotra azy ireo ho an'ny mpanjifa ho fanondroana.
Ny fitaovana rehetra Lianggong dia feno tanteraka araka ny habeny sy ny lanjany, izay mahafeno ny fepetra takian'ny fitaterana an-dranomasina sy ny Incoterms 2010 ho tsy maintsy atao.Ny vahaolana fonosana samihafa dia natao tsara ho an'ny fitaovana sy rafitra samihafa.
Ny toro-hevitra momba ny fandefasana dia halefa aminao amin'ny alàlan'ny mailaka avy amin'ny mpivarotra anay miaraka amin'ny fampahalalana momba ny fandefasana rehetra.ao anatin'izany ny anaran'ny sambo, ny laharan'ny kaontenera ary ny ETA sns.. Ny antontan-taratasim-pandefasana feno dia halefa any aminao na havoaka amin'ny Tele raha angatahina.